(9) - BookCubicle
အပိုငျး - ၉ : ယှနျးကိုလညျး ယှနျးခြီအဖွဈပဲ မွငျနမေိတယျ။
ယှနျးကို မကျြဝါးထငျထငျမွငျခှငျ့ရလိမျ့မယျလို့ ခနျ့ဝသေျော စိတျကူးတောငျ မယဉျဖူးဘူး။ မနကျအစောကွီးကတညျးက သူ နိုးနခေဲ့တယျ။ အရမျးကို စိတျလှုပျရှားနတေယျ။ ယှနျးကို သူ တှရေ့တော့မယျ။ အိပျယာနိုးနိုးခငျြး ဒါက အိပျမကျလားလို့ သူ့ပါးကိုသူဆှဲညှဈလိုကျမိသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့မဟုတျဘူး။ ဒါက တကယျပဲ။ သူ တကယျကွီးယှနျးကို တှရေ့တော့မှာ!
သူနိုးနပွေီလို့ ယှနျးခြီကို အသိပေးလိုကျတဲ့အခြိနျက မနကျ ၆ နာရီတောငျ မထိုးသေးဘူး။ အာ… ယှနျးခြီက ဘယျနိုးဦးမှာလဲ။ သူက အစောကွီးနိုးနတောလေ။ ခနျ့ဝသေျော ခုတငျမှာ ပွနျခှနေလေိုကျတယျ။ သူတို့ခြိနျးထားတာက နခေ့ငျးမှ။ ဒါကွောငျ့ ခဏလေးတော့ ပွနျအိပျမှရလိမျ့ဦးမယျ။ အခုခြိနျက အဒျေါတောငျ မနိုးသေးဘူးလေ။ ဒါပမေဲ့လညျး ယှနျးကို သူ တှရေ့တော့မယျဆိုတဲ့ အသိက သူ့မကျြလုံးတှကေို ကွောငျစတေယျ။
တဈသကျနဲ့တဈကိုယျ ပိတျရကျတှမှော အစောကွီးပှငျ့လာတတျတဲ့ မကျြလုံးတှကေို ခနျ့ဝသေျော မဆဲမိခဲ့ဘူး။ မကျြလုံးကွောငျလကျစနဲ့တော့ ယှနျးရဲ့ပုံတှကေို သူ ကွညျ့နလေိုကျတယျ။ နောကျပွီး သူ ခိုးရိုကျထားတဲ့ ယှနျးခြီရဲ့ပုံတှေ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မနကျစောစောမကျြနှာလေးက နီလာတယျ။ သူ ဘာတှတှေေးနတေယျဆိုတာကိုတော့ သူ တဈယောကျပဲ သိမှာပေါ့။
ယှနျးခြီအိပျရာက နိုးတော့ မနကျ ၇ နာရီခှဲ။ ဖုနျးကို ဖှငျ့ကွညျ့ကွညျ့ခငျြးမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ နိုးနပွေီဆိုတဲ့ Message ကို သူ တှလေို့ကျတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ နှုတျခမျးတှကေ စာတဈကွောငျး viber message ကွောငျ့ အလိုလို ကော့ညှတျသှားတော့တာပေါ့။ ခနျ့ဝသေျောကို သူ Morning ဆိုတဲ့ Sticker Message လေးတဈခုပွနျပို့ပွီး ခုတငျပျေါကဆငျးတယျ။ အိပျယာခငျးကို သသေပျအောငျ ပွနျခငျး၊ စောငျခေါကျ၊ ခေါငျးအုံးတှကေို နရောတကအြရငျထားတယျ။ ပွီးတော့ ဖုနျးကို စာကွညျ့စားပှဲပျေါ ပွနျတငျပွီး ရခြေိုးခနျးကို သှားဖို့အတှကျ သူ့အိပျခနျးထဲက ထှကျတယျ။
သူ့အိပျခနျးက ရခြေိုးခနျးအိမျသာတှဲရကျမပါဘူး။ တဈအိမျလုံးမှာ အဲ့လိုပါတာဆိုလို့ သူ့မိဘတှနေတေဲ့ တဈခနျးပဲရှိတာ။ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီးတော့ ယှနျးခြီ မကျြနှာသဈတယျ။ မှနျထဲက သူ့ပုံရိပျလေးက ကွညျလငျနလေရေဲ့။ အိပျယာနိုးစဖွဈတာကွောငျ့ ဆံပငျတှကေို သခြောမဖွီးသငျထားရသေးတာပေါ့ သူ့ ဆံပငျတှကေ ငှကျသိုကျလုံးလေးတဈခုလိုလညျးဖွဈနသေေးတယျ။ သှားတိုကျနရေငျးနဲ့ ယှနျးခြီပွုံးမိသေးတယျ။ သူ့အပွုံးတှကေိုဖွဈစတောက ခနျ့ဝသေျောဆိုတဲ့ ကွကျမောကျသီးတဈလုံးကလှဲရငျ ဘယျသူမြား ဖွဈနိုငျဦးမှာလဲလေ။
ပလုတျကငျြးပွီးနောကျမှာ ရဘေုံဘိုငျကိုပိတျပွီး ယှနျးခြီသကျပွငျးခတြယျ။ ခနျ့ဝသေျောက တကယျ့ကို ကံအကောငျးဆုံး fanboy လို့ပွောရမှာပဲ။ ဘာလို့ဆိုသူက တအားကိုကွိုကျရပါတယျဆိုတဲ့ သူနဲ့တှခှေ့ငျ့ရတယျလေ။ နောကျပွီး အဲ့ဒီယှနျးကလညျး သူ့ကိုသဘောကတြယျ။ အဆဈအနနေဲ့ ယှနျးခြီဆိုတာလေးတောငျ ပါသေးတယျ။
ယှနျးခြီသကျပွငျးခပြွနျတယျ။ ဒါဆို… ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို သဘောကတြာလား။ ဒါမှမဟုတျ ယှနျးကို သဘောကတြာလား။ ရုတျတရကျကွီး ယှနျးခြီတဈယောကျ ယှနျးကို မုနျးသလို ခံစားလိုကျရတယျ။ အတနျးထဲက ကောငျမလေးတှေ ယှနျးကိုသဘောမကတြဲ့ ခံစားခကျြကို ခကျြခငျြးကွီးကို သူ နားလညျလိုကျသလိုပါပဲ။ စိတျထဲလညျး ရယျလညျးရယျခငျြလာတယျ။ သူက သူ့ကိုယျသူကို မနာလိုဖွဈရတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ! ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးနဲ့တှခှေ့ငျ့ သူ ပေးလိုကျပွီပဲ။ ဘာတှတှေေးနသေေးတာလဲ။
တကယျတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးနဲ့ပေးတှခေ့ငျြစိတျ သူ့မှာမရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့… လိုကျခငျြတယျလို့ပွောတဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ပုံစံက အလိုလိုကျခငျြစရာသိပျကောငျးနတောမို့ သူ ခေါငျးညိတျဖွဈခဲ့တယျ။ တကယျပါပဲ… သူကတော့ ခနျ့ဝသေျောကို တျောတျောကွီးကို သဘောကနြတောပါပဲ။ ခနျ့ဝသေျောကလညျး သူ့ကို ယှနျးခြီအဖွဈနဲ့ ပိုသဘောကဖြို့ကို သူ တိတျတိတျလေးပဲ ဆုတောငျးနလေိုကျပါမယျလေ။
ဟနျနာအိမျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ သူ့မိဘတှလေညျး ရှိနခေဲ့တယျ။
သူ့အမနေဲ့ဟနျနာ အမေးအဖွလေုပျနတေုနျးမှာ ယှနျးခြီကတော့ အဝတျလဲနတေုနျးပဲ။ အဝတျလဲပွီးဆငျးလာတော့ ဟနျနာတဈယောကျ သူ့အမကေို ကပျခြှဲပွီး ဘာတှပွေောနလေဲတော့မသိ သူ့ကိုမွငျတာနဲ့ ဟနျနာ့မကျြနှာက ပွုံးဖွဲဖွဲဖွဈသှားတော့တယျ။
သူတို့ဆှမြေိုးအကုနျလုံးက အစိုးရဝနျထမျးတှဖွေဈကွတယျ။ အကုနျလုံးကလညျး ရာထူးကွီးပိုငျးကခညျြးပဲ။ ဒါကွောငျ့ ယှနျးခြီတို့ ဆှမြေိုးတှအေကုနျလုံးက မွို့မကျြနှာဖုံးဆိုတဲ့သူတှကေတောငျ လကျရှောငျထားတဲ့ သူတှဖွေဈကွတာပေါ့။ တကယျတော့လညျး မွို့မှာက ဆိုးသှမျးတာတှရှေိတယျဆိုပမေဲ့ ယှနျးခြီတို့က အလငျးဘကျခွမျးမှာနတေဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ စိုးရိမျစရာအကွောငျးက ရှိမနပေါဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး အမဆေိုတော့လညျး စိတျပူပေးရတာပါပဲ။
သူတို့နှုတျဆကျပွီး ကားပျေါရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ဟနျနာက တှတျထိုးတော့တယျ။
“အဈကို… နငျ ဦးနှောကျမှ မှနျသေးရဲ့လား… တခွားလူတဈယောကျကို ရိုကျကှငျးကို ပွောလိုကျတယျ…”
“ငါတို့ သူ့ကိုဝငျချေါရငျ ကောငျးမလား…”
ယှနျးခြီတိုးတိုးလေးမေးတယျ။ မကျြလုံးတှပွေုတျကသြှားလုနီးပါးကို ဟနျနာတဈယောကျ မကျြလုံးပွူးရတော့တယျ။ သူစိမျးတဈယောကျကို ရိုကျကှငျးကိုချေါထားတဲ့အကွောငျးကို ညကမှပွောပွတဲ့အပွငျ အခုလညျး ဝငျချေါရငျကောငျးမလား မေးနပွေနျပွီ။ တကယျပဲ ယှနျးခြီက စိတျမှကောငျးသေးရဲ့လား။
ပွောပွီးတာနဲ့ တဈဆကျတညျး ဒရိုငျဘာဦးလေးကို လိပျစာပွောပွနတေဲ့ယှနျးခြီကို ဟနျနာ နှုတျခမျးထျော လကျပိုကျပွီးပဲ ကွညျ့နလေိုကျတော့တယျ။ သခြောတယျ! အဲ့လူနဲ့ ယှနျးခြီက နညျးနညျးလေးမှ ရိုးသားမှာမဟုတျဘူး။ ဒရိုငျဘာဦးလေးကို ခနျ့ဝသေျောလိပျစာပွောပွီးတာနဲ့ ယှနျးခြီက လာချေါမဲ့အကွောငျးကို viber ကနေ message ပို့တဲ့ ခကျြခငျြး seen ပွသှားပွီးနောကျ reply ပွနျတဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ message က ယှနျးခြီမကျြနှာကို ရဲသှားစတေယျ။
ခနျ့ဝသေျော : “မငျး ငါ့အိမျကို သိနတောလား” တဲ့။
အာ… သူ ဘယျလိုတောငျမှ နမျောနမဲ့နိုငျရတာလဲ။
ယှနျးခြီ : “ငါ အတနျးခေါငျးဆောငျကို ဝိုငျးကူရတယျလေ…”
ခနျ့ဝသေျော : “အငျး ငါ စောငျ့နမေယျလေ…”
ယှနျးခြီ : “အငျး…”
ပွောပွီးတာနဲ့ သူ တဈဖကျလှညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ကို မကျြထောငျ့နီကွီးနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့ ဟနျနာနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွဈတော့တယျ။
ခနျ့ဝသေျောမှာ နာမညျဝှကျဘယျနှဈမြိုးလဲရှိလောကျလဲလို့ ယှနျးခြီတှေးမိလိုကျသေးတယျ။ အတနျးထဲက ကောငျမလေးတှကေ ခနျ့ဝသေျောကို ကွကျဖလေးလို့ ချေါတယျ။ ယှနျးခြီက ကွကျမောကျသီးလို့ချေါတယျ။ နောကျအခု ဟနျနာနဲ့သူ့မိဘတှကေတော့ လူရမျးကားလေးလို့ချေါတယျ။ အခုသူ သိသလောကျလေးတှငျ ခနျ့ဝသေျောမှာ နာမညျဝှကျသုံးခုရှိတယျ။
“နငျတို့ တျောတျော ခငျကွတာလား…”
ယှနျးခြီ ခေါငျးကို ဖွညျးဖွညျးလေးညိတျတယျ။ သူတို့က ခငျရုံမကဘူးဆိုတာကို သူတို့ပဲသိတယျလေ။ ဟနျနာရဲ့ မကျြလုံးတှမှေေးကဉျြးသှားတယျ။ ဟနျနာဆိုတဲ့ ဒီခြာတိတျမလေးက သိပျလညျတာကို သူ့အဈကိုကွီးက သိသိနဲ့ညာခငျြနသေေးတယျ။ သူတို့ကွားမှာ ခငျရုံပဲဆိုတာတငျ ဘယျဟုတျပါ့မလဲ။
“ဘာပဲဖွဈဖွဈ… သူက နငျ့ကို ယှနျးအနနေဲ့ နလေို့ ပွဿနာမရှာပါဘူးနျော…”
ယောကျြားလေးအတျောမြားမြားသာ ယှနျးခြီကို ယှနျးလို့သိသှားရငျ ဘာဖွဈလောကျလဲလို့ ဟနျနာတှေးဖူးခဲ့တယျ။ သူမအတှေးရဲ့ နောကျဆုံးအဖွကေတော့ ကွောကျစရာပါပဲ။ မြားပွားတဲ့အခြိုးပမာဏသော ယောကျြားလေးတှကေ ယှနျးက ယောကျြားလေးတဈယောကျဖွဈတာနဲ့ ဂေးလို့ဆိုပွီး ထိုးခကြွလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီအခါကရြငျ ယှနျးကိုမုနျးတဲ့သူတှကေပါ ပြျောပြျောကွီး လိုကျပွီးတော့ တဈတပျတဈအားဝိုငျးကူလိမျ့မယျ။ ဘာလို့ဆို ရနေဈတဲ့လူကို ဝါးကူထိုးရတာက သိပျကို လှယျကူတယျလေ။
လကျခံလူအခြိုးကတော့ နညျးပါးလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး လကျခံတဲ့လူတှကေ ဘယျလောကျမြားမှာမို့လဲ။ သခြောတာက ယှနျးခြီသာ ယှနျးဆိုတာကို သိသှားတာနဲ့ Cyber Bullying လုပျခံရမဲ့ ကိစ်စဖွဈပှားမှာကတော့ ၁၀၀ ရာနှုနျးကြျောတယျလို့တောငျ ဟနျနာလောငျးကွေးထပျရဲတယျ။ တကယျတော့ ရိုကျကှငျးကို အခွားလူချေါတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ဟနျနာ စိတျမတိုပါဘူး။ ယှနျးခြီကို ယှနျးလို့သိသှားတဲ့ အဲ့ဒီလူက ယှနျးခြီကို ဘာလုပျမှာလဲဆိုတာကိုပဲ သူမ စိတျပူတယျ။
ယှနျးခြီတဈခုခုဖွဈသှားရငျ ပထမဆုံးနောငျတရမှာ ဟနျနာပါပဲ။ ဘာကွောငျ့ဆို ယှနျးခြီဆိုတဲ့ကောငျလေးက ယှနျးဆိုတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈအောငျ လုပျခဲ့တာ သူမ မို့လို့။ စိတျပူစိုးရိမျတဲ့ မကျြလုံးတှနေဲ့ပဲ ဟနျနာ တိတျတိတျလေး ယှနျးခြီကို အကဲခတျနတေော့တယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ဒါကို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူမကို ခြော့ဖို့အတှကျ ပါလာတဲ့ အိတျထဲမှာ မုနျ့ရှာနလေရေဲ့။
ကားနောကျခနျးမှာ လူငယျလေးသုံးယောကျထိုငျနကွေတယျ။ ကောငျလေးနှဈယောကျနဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျ။ ယှနျးခြီက ကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေးရဲ့အလယျမှာရှိနခေဲ့တယျ။ မွဈဆီကို သှားတဲ့လမျးမှာ သူ မိတျဆကျပေးရတော့တာပေ့ါ။
“ဟနျနာတဲ့ ဒါက ငါ့ညီမဝမျးကှဲ…”
ခနျ့ဝသေျောက ဟနျနာကို ခငျခငျမငျမငျပဲ ပွနျပွုံးပွနှုတျဆကျပါတယျ။ ဟနျနာကတော့ နညျးနညျးအေးတိအေးစကျနိုငျတယျ။ ဒီအတှကျ ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးခြီအားနာရပမေဲ့ ဟနျနာ့ကို သူ ဘာမြှမပွောနိုငျဘူး။ ဘာကွောငျ့ဆို ဟနျနာအခုလိုမြိုးပွုမူတဲ့အကွောငျးရငျးကို ယှနျးခြီသိတယျလေ။ ဟနျနာက သူ့ကိုစိတျပူနတော။ ခနျ့ဝသေျောက ဘာအန်တရာယျမှ မရှိပါဘူးလို့ယှနျးခြီပွောခငျြပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောရှမှေ့ာမို့ သူ မပွောနိုငျဘူးလေ။ ထားလိုကျပါ ခနျ့ဝသေျောက လူကောငျးလေးတဈယောကျဆိုတာကို ဟနျနာလညျး ဒီနရေို့ကျကှငျးပွီးရငျ သိမှာပဲဟာ။
ဟနျနာက သူ့ကိုနညျးနညျးအေးစကျစကျနိုငျတယျဆိုတာ သိပမေဲ့လို့ ခနျ့ဝသေျောက စိတျထဲရှိမနပေါဘူး။ ယှနျးခြီတဈယောကျလုံး သူ့ဘေးမှာရှိနရေုံနဲ့သူလုံလောကျနတောပဲဟာ။
ဒီလိုနဲ့ရိုကျကှငျးနရောမွဈကို သူတို့ရောကျလာတော့တယျ။ မွဈနားမှာ အပငျဖားဖားတှလေညျးရှိလရေဲ့။
ဟနျနာက ဆျောသွတယျ။ ဟနျနာက ရိုကျဖို့နရောကို ရှေးပွီးပုံပါပဲ။ တကယျလညျးရှေးခဲ့ပွီးသားပါ။ နောကျမှ မွဈနားမှာနညျးနညျးရိုကျမှာဖွဈပွီးတောထဲမှာ အရငျရိုကျကွမှာဖွဈတယျ။
Props တှမြေားနတေဲ့ ဒရိုငျဘာအဈကိုဆီကနေ ခနျ့ဝသေျော ပစ်စညျးတခြို့ကူသယျတယျ။ ဟနျနာကတော့ ဘာမြှမပွောဘဲ အရှကေ့နေ ထှကျသှားလရေဲ့။ ဟနျနာ့နောကျက ယှနျးခြီ။ ယှနျးခြီနောကျက ခနျ့ဝသေျော။ နောကျဆုံးကတော့ ဒရိုငျဘာအဈကိုကွီး။ လူလေးယောကျဟာ ရထားတှဲတှလေိုမြိုး တဈယောကျနောကျကတဈယောကျ ထပျခပျြမကှာ လိုကျဝငျသှားခဲ့တယျ။
ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျော တိုးတိုးလေးကပျမေးတယျ။ သူ့ တိုးတိုးလေးမေးသံကို ဟနျနာမကွားဘဲမနပေါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီအပျေါမှာ မရိုးသားဘူးလို့ သူမ ထငျတယျ။ သူတို့ကွားထဲက ရိုးသားနိုငျစရာအကွောငျးမရှိပမေဲ့ ယှနျးခြီက ယှနျးဆိုတာကို ခနျ့ဝသေျော သိနတေဲ့ကိစ်စကွောငျ့ ဟနျနာ ရငျမအေးဘူး။ မတျောလို့ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို အကွံနဲ့ခဉျြးကပျတာ ဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ။
ယှနျးခြီကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ဂရုစိုကျမှုတှနေဲ့အသားကနြသေလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖွခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ အသားကမြှုက ဟနျနာ့ကို ပိုစိတျမအေးစဘေူး။ သူမအဈကိုကွီးက အရမျးကို အယုံလှယျတဲ့လူသားလေ။ ခနျ့ဝသေျောအကွောငျးကို ပိုသိအောငျ လလေ့ာသငျ့တယျလို့ ဟနျနာဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ယှနျးဆိုတဲ့ တကယျမရှိတဲ့မိနျးကလေးကွောငျ့ တကယျရှိနတေဲ့ ယှနျးခြီသာ တဈခုခုဖွဈရငျ သူမ တဈသကျလုံးနောငျတတှနေဲ့ နသှေားမိမှာ။
သူတို့ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ပွငျစရာရှိတာကို တကျညီဝိုငျးပွငျပွီးခြိနျမှာ ယှနျးခြီကို ဟနျနာအဝတျသှားလဲခိုငျးလိုကျတယျ။ ဒရိုငျဘာအဈကိုကလညျး သူ့ဘာသာနတောဆိုတော့ ဟနျနာနဲ့ခနျ့ဝသေျော နှဈယောကျတညျး ကနျြခဲ့တော့တာပေါ့။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ တောကျတောကျပပဖွဈနတေဲ့ မကျြနှာကို ဟနျနာမနှဈမွို့စှာကွညျ့တယျ။ ဟုတျတယျ… ဒီလူက တကယျပဲ ယှနျးကို ကွညျ့ဖို့ လာတာပဲ။
“ယှနျးက ယောကျြားလေးတဈယောကျဖွဈနလေို့ ရှငျစိတျမပကျြသှားဘူးလား…”
စိတျအခဉျြပေါကျနတေဲ့ ဟနျနာက ခနျ့ဝသေျောကို လှမျးအငျေါတူးတယျ။ ဒီကလေးမက သူ့ကို မကွညျလငျတာကို သိတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော စကားပွနျမပွောခငျြဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး ယှနျးခြီရဲ့ညီမဝမျးကှဲဖွဈတာကွောငျ့ ယှနျးခြီနဲ့သူ့ကွားကို အဆငျမပွအေောငျ ဒီကောငျမလေးလုပျနိုငျလောကျတာကို စဉျးစားမိပွီး ခနျ့ဝသေျော ခပျအေးအေးပဲပွနျဖွတေယျ။
အဖွကေ တိုတိုတုတျတုတျပါပဲ။ တကယျလညျး စိတျမပကျြသှားပါဘူး။ အဲ့တုနျးက ခံစားခကျြကို အတိအကပြွောပွရရငျ သူ ပြျောနတောလို့တောငျ ပွောလို့ရသေးတယျ။
“တကယျလို့ အဈကိုကွီးကို ရှငျ မကောငျးကွံရငျ ရှငျ့နောကျကို ကြှနျမ ရဆေုံးမွဆေုံးထိလိုကျမှာ…”
ခနျ့ဝသေျော မကျြခုံးတှေ တှနျ့ခြိုးသှားတယျ။ သူက ယှနျးခြီကို မကောငျးကွံရမယျ။ သူ ဒီလောကျထိယှနျးခြီကို ခဈြတာကို။ ဒီကောငျမလေးက ဘာလို့ အခုလိုမြိုးတှေ တှေးနတောလဲ။ တဈခုခုတော့ မှားနပွေီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ခနျ့ဝသေျော ကလေးမလေးကို လှညျ့ကွညျ့တယျ။ အဲကလေးမလေးသာပွောတာပါ။ ဒီကောငျမလေးက သူတို့နဲ့ကှာလှ နှဈနှဈအလှနျဆုံးပေါ့။
ကောငျမလေးရဲ့စူးစူးရဲရဲအကွညျ့တှကေ သူမ စကားက အခှံသကျသကျမဟုတျဘူးဆိုတာကို ပွောနသေလိုပါပဲ။
“ငါက ဘာလို့ ယှနျးခြီကို မကောငျးကွံရမှာလဲ…”
“သူက ယှနျးဆိုတာကို မီဒီယာတှကေိုဖှဖို့လေ…”
အာ… အဖွဈက ဘာလဲဆိုတာကို ခနျ့ဝသေျောသိလိုကျတယျ။ ဒီကောငျမလေးက သူက ယှနျးခြီကို အကွံဆိုးကွီးနဲ့ ခဉျြးကပျတယျလို့ ထငျနပေုံပါပဲ။ သူ့မှာ ဘာအကွံဆိုးမှ မရှိပါဘူး။ ရှိတယျဆိုရငျတောငျ အဲ့အကွံဆိုးက မီဒီယာတှကေို ဖှဖို့တော့ မဟုတျဘူး။ အဲ့ဒါ အသခြောပဲ။
“ဘယျသူက ကိုယျခဈြတဲ့သူ နဈနာအောငျလို့လုပျမှာလဲ…”
သူ ဆကျပွောတယျ။ ဟနျနာ့ရဲ့မကျြလုံးဝိုငျးတှကေ သူ့စကားကို အံ့သွသလိုကွညျ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ခပျတညျတညျပဲ ကလေးမရဲ့ မကျြလုံးလေးတှထေဲ စိုကျကွညျ့တယျ။
“ယှနျးက ယှနျးခြီရဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုလို့ ငါ လကျခံပါတယျ… ဝနျခံရရငျ ငါ ယှနျးကို အရငျသဘောကတြာ… ဒါပမေဲ့ ယှနျးခြီက ယှနျးဖွဈတာကွောငျ့ ငါ သူ့ကို သဘောကတြာမဟုတျဘူး… ယှနျးခြီက ယှနျးခြီဖွဈနလေို့ကို သဘောကတြာ…”
ခနျ့ဝသေျောက ကဗြာတှမေဆနျတတျဘူး။ တဈဖကျသားကိုလညျး သူ ပွောတာကို နားလညျအောငျ မပွောပွတတျဘူး။ သူ ပွောတာကို ဒီကောငျမလေးနားရော လညျပါ့မလားလို့ ခနျ့ဝသေျော တှေးမိတယျ။
ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ ကောငျမလေးက သူ့ကိုပွဿနာမရှာတော့ဘူး။ သူတို့ငွိမျနကွေရငျးကနေ ယှနျးခြီထှကျလာတာကွောငျ့ ဟနျနာက ယှနျးခြီဆီထှကျသှားခဲ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အကွညျ့တှကေ ဆံပငျအတုအနကျဖွောငျ့ဖွောငျ့စငျးစငျးနဲ့ ရငျပွတျဂါဝနျအနကျကို ဝတျထားတဲ့ ယှနျးခြီဆီရောကျသှားတယျ။ ယှနျးခြီက ကိုယျတိုငျလညျး မိတျကပျကောငျးကောငျးပွငျတတျတာပဲလို့ ခနျ့ဝသေျော တှေးတယျ။
ယှနျးကို မွငျရရငျ ဘာဖွဈသှားမလဲလို့ ခနျ့ဝသေျော စိတျကူးတှယေဉျနခေဲ့တယျ။ ရိုကျကှငျးကို သူ လိုကျလာတာ ယှနျးကို မွငျခငျြလို့လေ။ ဒါပမေဲ့ အံ့သွစရာကောငျးတာက… ယှနျးကို သူ ယှနျးခြီလို့ပဲ မွငျနတေယျ။ သူ့အတှကျ သူတို့နှဈယောကျက တဈယောကျတညျးပါပဲ။ ခနျ့ဝသေျော တိုးတိုးလေးရယျတယျ။ သူ တကယျပဲ ယှနျးခြီကို ရူးမူးနတောပဲ။ ဒီကောငျလေး ဘာပုံနဲ့ဖွဈဖွဈ သူ သဘောကတြယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရိုကျကှငျးက စတငျခဲ့ကွပါတယျ။ ပြျောစရာအမှတျတရတခြို့နဲ့ပေါ့။ သွျော… ရိုကျကှငျးပွီးဆုံးသှားတဲ့အခြိနျမှာ ဟနျနာက ခနျ့ဝသေျောကို အမှတျပွညျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ သူ့အဈကိုကွီးရဲ့ ရညျးစားအဈကိုကွီးဖွဈဖို့ ခနျ့ဝသေျောက သငျ့တျောပါတယျဆိုပွီးတော့ပေါ့။
အပိုင်း - ၉ : ယွန်းကိုလည်း ယွန်းချီအဖြစ်ပဲ မြင်နေမိတယ်။
ယွန်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်ဝေသော် စိတ်ကူးတောင် မယဉ်ဖူးဘူး။ မနက်အစောကြီးကတည်းက သူ နိုးနေခဲ့တယ်။ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ယွန်းကို သူ တွေ့ရတော့မယ်။ အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ဒါက အိပ်မက်လားလို့ သူ့ပါးကိုသူဆွဲညှစ်လိုက်မိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။ ဒါက တကယ်ပဲ။ သူ တကယ်ကြီးယွန်းကို တွေ့ရတော့မှာ!
သူနိုးနေပြီလို့ ယွန်းချီကို အသိပေးလိုက်တဲ့အချိန်က မနက် ၆ နာရီတောင် မထိုးသေးဘူး။ အာ… ယွန်းချီက ဘယ်နိုးဦးမှာလဲ။ သူက အစောကြီးနိုးနေတာလေ။ ခန့်ဝေသော် ခုတင်မှာ ပြန်ခွေနေလိုက်တယ်။ သူတို့ချိန်းထားတာက နေ့ခင်းမှ။ ဒါကြောင့် ခဏလေးတော့ ပြန်အိပ်မှရလိမ့်ဦးမယ်။ အခုချိန်က အဒေါ်တောင် မနိုးသေးဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ယွန်းကို သူ တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိက သူ့မျက်လုံးတွေကို ကြောင်စေတယ်။
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ပိတ်ရက်တွေမှာ အစောကြီးပွင့်လာတတ်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို ခန့်ဝေသော် မဆဲမိခဲ့ဘူး။ မျက်လုံးကြောင်လက်စနဲ့တော့ ယွန်းရဲ့ပုံတွေကို သူ ကြည့်နေလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး သူ ခိုးရိုက်ထားတဲ့ ယွန်းချီရဲ့ပုံတွေ။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မနက်စောစောမျက်နှာလေးက နီလာတယ်။ သူ ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူ တစ်ယောက်ပဲ သိမှာပေါ့။
ယွန်းချီအိပ်ရာက နိုးတော့ မနက် ၇ နာရီခွဲ။ ဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ချင်းမှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ နိုးနေပြီဆိုတဲ့ Message ကို သူ တွေ့လိုက်တယ်။ ယွန်းချီရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက စာတစ်ကြောင်း viber message ကြောင့် အလိုလို ကော့ညွှတ်သွားတော့တာပေါ့။ ခန့်ဝေသော်ကို သူ Morning ဆိုတဲ့ Sticker Message လေးတစ်ခုပြန်ပို့ပြီး ခုတင်ပေါ်ကဆင်းတယ်။ အိပ်ယာခင်းကို သေသပ်အောင် ပြန်ခင်း၊ စောင်ခေါက်၊ ခေါင်းအုံးတွေကို နေရာတကျအရင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းကို စာကြည့်စားပွဲပေါ် ပြန်တင်ပြီး ရေချိုးခန်းကို သွားဖို့အတွက် သူ့အိပ်ခန်းထဲက ထွက်တယ်။
သူ့အိပ်ခန်းက ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲရက်မပါဘူး။ တစ်အိမ်လုံးမှာ အဲ့လိုပါတာဆိုလို့ သူ့မိဘတွေနေတဲ့ တစ်ခန်းပဲရှိတာ။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ ယွန်းချီ မျက်နှာသစ်တယ်။ မှန်ထဲက သူ့ပုံရိပ်လေးက ကြည်လင်နေလေရဲ့။ အိပ်ယာနိုးစဖြစ်တာကြောင့် ဆံပင်တွေကို သေချာမဖြီးသင်ထားရသေးတာပေါ့ သူ့ ဆံပင်တွေက ငှက်သိုက်လုံးလေးတစ်ခုလိုလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။ သွားတိုက်နေရင်းနဲ့ ယွန်းချီပြုံးမိသေးတယ်။ သူ့အပြုံးတွေကိုဖြစ်စေတာက ခန့်ဝေသော်ဆိုတဲ့ ကြက်မောက်သီးတစ်လုံးကလွဲရင် ဘယ်သူများ ဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲလေ။
ပလုတ်ကျင်းပြီးနောက်မှာ ရေဘုံဘိုင်ကိုပိတ်ပြီး ယွန်းချီသက်ပြင်းချတယ်။ ခန့်ဝေသော်က တကယ့်ကို ကံအကောင်းဆုံး fanboy လို့ပြောရမှာပဲ။ ဘာလို့ဆိုသူက တအားကိုကြိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်လေ။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီယွန်းကလည်း သူ့ကိုသဘောကျတယ်။ အဆစ်အနေနဲ့ ယွန်းချီဆိုတာလေးတောင် ပါသေးတယ်။
ယွန်းချီသက်ပြင်းချပြန်တယ်။ ဒါဆို… ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို သဘောကျတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ယွန်းကို သဘောကျတာလား။ ရုတ်တရက်ကြီး ယွန်းချီတစ်ယောက် ယွန်းကို မုန်းသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အတန်းထဲက ကောင်မလေးတွေ ယွန်းကိုသဘောမကျတဲ့ ခံစားချက်ကို ချက်ချင်းကြီးကို သူ နားလည်လိုက်သလိုပါပဲ။ စိတ်ထဲလည်း ရယ်လည်းရယ်ချင်လာတယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူကို မနာလိုဖြစ်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်! ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းနဲ့တွေ့ခွင့် သူ ပေးလိုက်ပြီပဲ။ ဘာတွေတွေးနေသေးတာလဲ။
တကယ်တော့ ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းနဲ့ပေးတွေ့ချင်စိတ် သူ့မှာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့… လိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ပုံစံက အလိုလိုက်ချင်စရာသိပ်ကောင်းနေတာမို့ သူ ခေါင်းညိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်ပါပဲ… သူကတော့ ခန့်ဝေသော်ကို တော်တော်ကြီးကို သဘောကျနေတာပါပဲ။ ခန့်ဝေသော်ကလည်း သူ့ကို ယွန်းချီအဖြစ်နဲ့ ပိုသဘောကျဖို့ကို သူ တိတ်တိတ်လေးပဲ ဆုတောင်းနေလိုက်ပါမယ်လေ။
ဟန်နာအိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့မိဘတွေလည်း ရှိနေခဲ့တယ်။
သူ့အမေနဲ့ဟန်နာ အမေးအဖြေလုပ်နေတုန်းမှာ ယွန်းချီကတော့ အဝတ်လဲနေတုန်းပဲ။ အဝတ်လဲပြီးဆင်းလာတော့ ဟန်နာတစ်ယောက် သူ့အမေကို ကပ်ချွဲပြီး ဘာတွေပြောနေလဲတော့မသိ သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ ဟန်နာ့မျက်နှာက ပြုံးဖြဲဖြဲဖြစ်သွားတော့တယ်။
သူတို့ဆွေမျိုးအကုန်လုံးက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ အကုန်လုံးကလည်း ရာထူးကြီးပိုင်းကချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် ယွန်းချီတို့ ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးက မြို့မျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့သူတွေကတောင် လက်ရှောင်ထားတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြတာပေါ့။ တကယ်တော့လည်း မြို့မှာက ဆိုးသွမ်းတာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ယွန်းချီတို့က အလင်းဘက်ခြမ်းမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် စိုးရိမ်စရာအကြောင်းက ရှိမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အမေဆိုတော့လည်း စိတ်ပူပေးရတာပါပဲ။
သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီး ကားပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဟန်နာက တွတ်ထိုးတော့တယ်။
“အစ်ကို… နင် ဦးနှောက်မှ မှန်သေးရဲ့လား… တခြားလူတစ်ယောက်ကို ရိုက်ကွင်းကို ပြောလိုက်တယ်…”
“ငါတို့ သူ့ကိုဝင်ခေါ်ရင် ကောင်းမလား…”
ယွန်းချီတိုးတိုးလေးမေးတယ်။ မျက်လုံးတွေပြုတ်ကျသွားလုနီးပါးကို ဟန်နာတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးရတော့တယ်။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ရိုက်ကွင်းကိုခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကို ညကမှပြောပြတဲ့အပြင် အခုလည်း ဝင်ခေါ်ရင်ကောင်းမလား မေးနေပြန်ပြီ။ တကယ်ပဲ ယွန်းချီက စိတ်မှကောင်းသေးရဲ့လား။
ပြောပြီးတာနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ဒရိုင်ဘာဦးလေးကို လိပ်စာပြောပြနေတဲ့ယွန်းချီကို ဟန်နာ နှုတ်ခမ်းထော် လက်ပိုက်ပြီးပဲ ကြည့်နေလိုက်တော့တယ်။ သေချာတယ်! အဲ့လူနဲ့ ယွန်းချီက နည်းနည်းလေးမှ ရိုးသားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒရိုင်ဘာဦးလေးကို ခန့်ဝေသော်လိပ်စာပြောပြီးတာနဲ့ ယွန်းချီက လာခေါ်မဲ့အကြောင်းကို viber ကနေ message ပို့တဲ့ ချက်ချင်း seen ပြသွားပြီးနောက် reply ပြန်တဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ message က ယွန်းချီမျက်နှာကို ရဲသွားစေတယ်။
ခန့်ဝေသော် : “မင်း ငါ့အိမ်ကို သိနေတာလား” တဲ့။
အာ… သူ ဘယ်လိုတောင်မှ နမော်နမဲ့နိုင်ရတာလဲ။
ယွန်းချီ : “ငါ အတန်းခေါင်းဆောင်ကို ဝိုင်းကူရတယ်လေ…”
ခန့်ဝေသော် : “အင်း ငါ စောင့်နေမယ်လေ…”
ယွန်းချီ : “အင်း…”
ပြောပြီးတာနဲ့ သူ တစ်ဖက်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ဟန်နာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တော့တယ်။
ခန့်ဝေသော်မှာ နာမည်ဝှက်ဘယ်နှစ်မျိုးလဲရှိလောက်လဲလို့ ယွန်းချီတွေးမိလိုက်သေးတယ်။ အတန်းထဲက ကောင်မလေးတွေက ခန့်ဝေသော်ကို ကြက်ဖလေးလို့ ခေါ်တယ်။ ယွန်းချီက ကြက်မောက်သီးလို့ခေါ်တယ်။ နောက်အခု ဟန်နာနဲ့သူ့မိဘတွေကတော့ လူရမ်းကားလေးလို့ခေါ်တယ်။ အခုသူ သိသလောက်လေးတွင် ခန့်ဝေသော်မှာ နာမည်ဝှက်သုံးခုရှိတယ်။
“နင်တို့ တော်တော် ခင်ကြတာလား…”
ယွန်းချီ ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်းလေးညိတ်တယ်။ သူတို့က ခင်ရုံမကဘူးဆိုတာကို သူတို့ပဲသိတယ်လေ။ ဟန်နာရဲ့ မျက်လုံးတွေမှေးကျဉ်းသွားတယ်။ ဟန်နာဆိုတဲ့ ဒီချာတိတ်မလေးက သိပ်လည်တာကို သူ့အစ်ကိုကြီးက သိသိနဲ့ညာချင်နေသေးတယ်။ သူတို့ကြားမှာ ခင်ရုံပဲဆိုတာတင် ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… သူက နင့်ကို ယွန်းအနေနဲ့ နေလို့ ပြဿနာမရှာပါဘူးနော်…”
ယောကျာ်းလေးအတော်များများသာ ယွန်းချီကို ယွန်းလို့သိသွားရင် ဘာဖြစ်လောက်လဲလို့ ဟန်နာတွေးဖူးခဲ့တယ်။ သူမအတွေးရဲ့ နောက်ဆုံးအဖြေကတော့ ကြောက်စရာပါပဲ။ များပြားတဲ့အချိုးပမာဏသော ယောကျာ်းလေးတွေက ယွန်းက ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ ဂေးလို့ဆိုပြီး ထိုးချကြလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအခါကျရင် ယွန်းကိုမုန်းတဲ့သူတွေကပါ ပျော်ပျော်ကြီး လိုက်ပြီးတော့ တစ်တပ်တစ်အားဝိုင်းကူလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆို ရေနစ်တဲ့လူကို ဝါးကူထိုးရတာက သိပ်ကို လွယ်ကူတယ်လေ။
လက်ခံလူအချိုးကတော့ နည်းပါးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လက်ခံတဲ့လူတွေက ဘယ်လောက်များမှာမို့လဲ။ သေချာတာက ယွန်းချီသာ ယွန်းဆိုတာကို သိသွားတာနဲ့ Cyber Bullying လုပ်ခံရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပွားမှာကတော့ ၁၀၀ ရာနှုန်းကျော်တယ်လို့တောင် ဟန်နာလောင်းကြေးထပ်ရဲတယ်။ တကယ်တော့ ရိုက်ကွင်းကို အခြားလူခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟန်နာ စိတ်မတိုပါဘူး။ ယွန်းချီကို ယွန်းလို့သိသွားတဲ့ အဲ့ဒီလူက ယွန်းချီကို ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာကိုပဲ သူမ စိတ်ပူတယ်။
ယွန်းချီတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ပထမဆုံးနောင်တရမှာ ဟန်နာပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဆို ယွန်းချီဆိုတဲ့ကောင်လေးက ယွန်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာ သူမ မို့လို့။ စိတ်ပူစိုးရိမ်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ဟန်နာ တိတ်တိတ်လေး ယွန်းချီကို အကဲခတ်နေတော့တယ်။ ယွန်းချီကတော့ ဒါကို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူမကို ချော့ဖို့အတွက် ပါလာတဲ့ အိတ်ထဲမှာ မုန့်ရှာနေလေရဲ့။
ကားနောက်ခန်းမှာ လူငယ်လေးသုံးယောက်ထိုင်နေကြတယ်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ ယွန်းချီက ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလယ်မှာရှိနေခဲ့တယ်။ မြစ်ဆီကို သွားတဲ့လမ်းမှာ သူ မိတ်ဆက်ပေးရတော့တာပေ့ါ။
“ဟန်နာတဲ့ ဒါက ငါ့ညီမဝမ်းကွဲ…”
ခန့်ဝေသော်က ဟန်နာကို ခင်ခင်မင်မင်ပဲ ပြန်ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဟန်နာကတော့ နည်းနည်းအေးတိအေးစက်နိုင်တယ်။ ဒီအတွက် ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းချီအားနာရပေမဲ့ ဟန်နာ့ကို သူ ဘာမျှမပြောနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ဟန်နာအခုလိုမျိုးပြုမူတဲ့အကြောင်းရင်းကို ယွန်းချီသိတယ်လေ။ ဟန်နာက သူ့ကိုစိတ်ပူနေတာ။ ခန့်ဝေသော်က ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူးလို့ယွန်းချီပြောချင်ပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်ရှေ့မှာမို့ သူ မပြောနိုင်ဘူးလေ။ ထားလိုက်ပါ ခန့်ဝေသော်က လူကောင်းလေးတစ်ယောက်ဆိုတာကို ဟန်နာလည်း ဒီနေ့ရိုက်ကွင်းပြီးရင် သိမှာပဲဟာ။
ဟန်နာက သူ့ကိုနည်းနည်းအေးစက်စက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့လို့ ခန့်ဝေသော်က စိတ်ထဲရှိမနေပါဘူး။ ယွန်းချီတစ်ယောက်လုံး သူ့ဘေးမှာရှိနေရုံနဲ့သူလုံလောက်နေတာပဲဟာ။
ဒီလိုနဲ့ရိုက်ကွင်းနေရာမြစ်ကို သူတို့ရောက်လာတော့တယ်။ မြစ်နားမှာ အပင်ဖားဖားတွေလည်းရှိလေရဲ့။
ဟန်နာက ဆော်သြတယ်။ ဟန်နာက ရိုက်ဖို့နေရာကို ရွေးပြီးပုံပါပဲ။ တကယ်လည်းရွေးခဲ့ပြီးသားပါ။ နောက်မှ မြစ်နားမှာနည်းနည်းရိုက်မှာဖြစ်ပြီးတောထဲမှာ အရင်ရိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်။
Props တွေများနေတဲ့ ဒရိုင်ဘာအစ်ကိုဆီကနေ ခန့်ဝေသော် ပစ္စည်းတချို့ကူသယ်တယ်။ ဟန်နာကတော့ ဘာမျှမပြောဘဲ အရှေ့ကနေ ထွက်သွားလေရဲ့။ ဟန်နာ့နောက်က ယွန်းချီ။ ယွန်းချီနောက်က ခန့်ဝေသော်။ နောက်ဆုံးကတော့ ဒရိုင်ဘာအစ်ကိုကြီး။ လူလေးယောက်ဟာ ရထားတွဲတွေလိုမျိုး တစ်ယောက်နောက်ကတစ်ယောက် ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။
ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော် တိုးတိုးလေးကပ်မေးတယ်။ သူ့ တိုးတိုးလေးမေးသံကို ဟန်နာမကြားဘဲမနေပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီအပေါ်မှာ မရိုးသားဘူးလို့ သူမ ထင်တယ်။ သူတို့ကြားထဲက ရိုးသားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေမဲ့ ယွန်းချီက ယွန်းဆိုတာကို ခန့်ဝေသော် သိနေတဲ့ကိစ္စကြောင့် ဟန်နာ ရင်မအေးဘူး။ မတော်လို့ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို အကြံနဲ့ချဉ်းကပ်တာ ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ယွန်းချီကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့အသားကျနေသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖြေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီရဲ့ အသားကျမှုက ဟန်နာ့ကို ပိုစိတ်မအေးစေဘူး။ သူမအစ်ကိုကြီးက အရမ်းကို အယုံလွယ်တဲ့လူသားလေ။ ခန့်ဝေသော်အကြောင်းကို ပိုသိအောင် လေ့လာသင့်တယ်လို့ ဟန်နာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယွန်းဆိုတဲ့ တကယ်မရှိတဲ့မိန်းကလေးကြောင့် တကယ်ရှိနေတဲ့ ယွန်းချီသာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် သူမ တစ်သက်လုံးနောင်တတွေနဲ့ နေသွားမိမှာ။
သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ပြင်စရာရှိတာကို တက်ညီဝိုင်းပြင်ပြီးချိန်မှာ ယွန်းချီကို ဟန်နာအဝတ်သွားလဲခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒရိုင်ဘာအစ်ကိုကလည်း သူ့ဘာသာနေတာဆိုတော့ ဟန်နာနဲ့ခန့်ဝေသော် နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တော့တာပေါ့။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ တောက်တောက်ပပဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာကို ဟန်နာမနှစ်မြို့စွာကြည့်တယ်။ ဟုတ်တယ်… ဒီလူက တကယ်ပဲ ယွန်းကို ကြည့်ဖို့ လာတာပဲ။
“ယွန်းက ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ ရှင်စိတ်မပျက်သွားဘူးလား…”
စိတ်အချဉ်ပေါက်နေတဲ့ ဟန်နာက ခန့်ဝေသော်ကို လှမ်းအငေါ်တူးတယ်။ ဒီကလေးမက သူ့ကို မကြည်လင်တာကို သိတာကြောင့် ခန့်ဝေသော် စကားပြန်မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ယွန်းချီရဲ့ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်တာကြောင့် ယွန်းချီနဲ့သူ့ကြားကို အဆင်မပြေအောင် ဒီကောင်မလေးလုပ်နိုင်လောက်တာကို စဉ်းစားမိပြီး ခန့်ဝေသော် ခပ်အေးအေးပဲပြန်ဖြေတယ်။
အဖြေက တိုတိုတုတ်တုတ်ပါပဲ။ တကယ်လည်း စိတ်မပျက်သွားပါဘူး။ အဲ့တုန်းက ခံစားချက်ကို အတိအကျပြောပြရရင် သူ ပျော်နေတာလို့တောင် ပြောလို့ရသေးတယ်။
“တကယ်လို့ အစ်ကိုကြီးကို ရှင် မကောင်းကြံရင် ရှင့်နောက်ကို ကျွန်မ ရေဆုံးမြေဆုံးထိလိုက်မှာ…”
ခန့်ဝေသော် မျက်ခုံးတွေ တွန့်ချိုးသွားတယ်။ သူက ယွန်းချီကို မကောင်းကြံရမယ်။ သူ ဒီလောက်ထိယွန်းချီကို ချစ်တာကို။ ဒီကောင်မလေးက ဘာလို့ အခုလိုမျိုးတွေ တွေးနေတာလဲ။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ခန့်ဝေသော် ကလေးမလေးကို လှည့်ကြည့်တယ်။ အဲကလေးမလေးသာပြောတာပါ။ ဒီကောင်မလေးက သူတို့နဲ့ကွာလှ နှစ်နှစ်အလွန်ဆုံးပေါ့။
ကောင်မလေးရဲ့စူးစူးရဲရဲအကြည့်တွေက သူမ စကားက အခွံသက်သက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောနေသလိုပါပဲ။
“ငါက ဘာလို့ ယွန်းချီကို မကောင်းကြံရမှာလဲ…”
“သူက ယွန်းဆိုတာကို မီဒီယာတွေကိုဖွဖို့လေ…”
အာ… အဖြစ်က ဘာလဲဆိုတာကို ခန့်ဝေသော်သိလိုက်တယ်။ ဒီကောင်မလေးက သူက ယွန်းချီကို အကြံဆိုးကြီးနဲ့ ချဉ်းကပ်တယ်လို့ ထင်နေပုံပါပဲ။ သူ့မှာ ဘာအကြံဆိုးမှ မရှိပါဘူး။ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အဲ့အကြံဆိုးက မီဒီယာတွေကို ဖွဖို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါ အသေချာပဲ။
“ဘယ်သူက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ နစ်နာအောင်လို့လုပ်မှာလဲ…”
သူ ဆက်ပြောတယ်။ ဟန်နာ့ရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းတွေက သူ့စကားကို အံ့သြသလိုကြည့်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က ခပ်တည်တည်ပဲ ကလေးမရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေထဲ စိုက်ကြည့်တယ်။
“ယွန်းက ယွန်းချီရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ ငါ လက်ခံပါတယ်… ဝန်ခံရရင် ငါ ယွန်းကို အရင်သဘောကျတာ… ဒါပေမဲ့ ယွန်းချီက ယွန်းဖြစ်တာကြောင့် ငါ သူ့ကို သဘောကျတာမဟုတ်ဘူး… ယွန်းချီက ယွန်းချီဖြစ်နေလို့ကို သဘောကျတာ…”
ခန့်ဝေသော်က ကဗျာတွေမဆန်တတ်ဘူး။ တစ်ဖက်သားကိုလည်း သူ ပြောတာကို နားလည်အောင် မပြောပြတတ်ဘူး။ သူ ပြောတာကို ဒီကောင်မလေးနားရော လည်ပါ့မလားလို့ ခန့်ဝေသော် တွေးမိတယ်။
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကောင်မလေးက သူ့ကိုပြဿနာမရှာတော့ဘူး။ သူတို့ငြိမ်နေကြရင်းကနေ ယွန်းချီထွက်လာတာကြောင့် ဟန်နာက ယွန်းချီဆီထွက်သွားခဲ့တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့အကြည့်တွေက ဆံပင်အတုအနက်ဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်းနဲ့ ရင်ပြတ်ဂါဝန်အနက်ကို ဝတ်ထားတဲ့ ယွန်းချီဆီရောက်သွားတယ်။ ယွန်းချီက ကိုယ်တိုင်လည်း မိတ်ကပ်ကောင်းကောင်းပြင်တတ်တာပဲလို့ ခန့်ဝေသော် တွေးတယ်။
ယွန်းကို မြင်ရရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့ ခန့်ဝေသော် စိတ်ကူးတွေယဉ်နေခဲ့တယ်။ ရိုက်ကွင်းကို သူ လိုက်လာတာ ယွန်းကို မြင်ချင်လို့လေ။ ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတာက… ယွန်းကို သူ ယွန်းချီလို့ပဲ မြင်နေတယ်။ သူ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။ ခန့်ဝေသော် တိုးတိုးလေးရယ်တယ်။ သူ တကယ်ပဲ ယွန်းချီကို ရူးမူးနေတာပဲ။ ဒီကောင်လေး ဘာပုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူ သဘောကျတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းက စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပျော်စရာအမှတ်တရတချို့နဲ့ပေါ့။ သြော်… ရိုက်ကွင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဟန်နာက ခန့်ဝေသော်ကို အမှတ်ပြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်ကိုကြီးရဲ့ ရည်းစားအစ်ကိုကြီးဖြစ်ဖို့ ခန့်ဝေသော်က သင့်တော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
MaskMelon 20.12.2019, 12:49 5
Nyo Lae 19.12.2019, 09:09 5
MeMo227 19.12.2019, 07:34 5
Byul1485 19.12.2019, 02:14 4.8
အွားးးးး ချစ်စရာလေး 😭😭💛